“Kani wuxuu noqon karaa xilli ciyaareedkeygii ugu dambeeyay ee Barcelona sababtan awgeed!” – Pique – Gool FM
“Kani wuxuu noqon karaa xilli ciyaareedkeygii ugu dambeeyay ee Barcelona sababtan awgeed!” – Pique
Dajiye September 7, 2021
(Barcelona) 07 Sebt 2021. Daafaca Barcelona ee Gerard Pique ayaa sheegay in xilli ciyaareedkan laga yaabo inuu noqdo kiisii ugu dambeeyay kooxda Blaugrana, haddii uu go’aansado inuu ka fariisto guud ahaan ciyaarista kubadda cagta.
Gerard Pique ayaa loo arkaa mid ka mid ah ciyaartoydii ugu muhiimsanaa uguna fiicnaa ee soo maray taariikhda kooxda Barcelona, waxaana ku wehliya Sergio Busquets, maadaama ay haatan ka soo hareen jiilkii dahabigi ahaa Barca oo ay hoggaaminayeen Messi, Xavi iyo Iniesta.
Gerard Pique ayaa ku soo laabtay Barcelona xagaagii 2008, isagoo ka yimid Manchester United, waxaana uu ilaa iyo haatan Blaugrana kala qeyb galay 568 kulan.
Gerard Pique ayaa ku xaqiijiyay wareysi uu ku bixiyay shabakada caalamiga ah ee “Goal” inuu kubadda cagta kaga fariisanayo kooxdiisa Barcelona, wuxuuna yiri:
“Mustaqbalkeyga Barcelona?, dhab ahaantii Barcelona ayaan uga fariisan doonaa ciyaarista kubadda cagta.”
“Kani wuxuu noqon karaa xilli ciyaareedkeygii ugu dambeeyay ee Barcelona, haa, sanad walba waan ciyaaraa oo waan arkaa waxa dhaca, marka ma dammaanad qaadi karo inaan halkaan imaan doono xilli ciyaareedka soo socda.”
“Maalinta aan dareemo inaanan sii caawin karin Barcelona, ​​waxaan ku dhawaaqi doonaa inaan fariisan doono.”
Cristiano Ronaldo oo markii ugu horreysay gaaray xerada tababarka ee kooxda Manchester United
Cristiano Ronaldo oo Tababarkiisii ugu horreeyey la qaatay Xiddigaha Manchester United tan iyo dib ugu soo laabashadiisii Kooxda... + SAWIRRO